‘अनि कसरी उभो लाग्छ देश ?’ : आयुक्त बाँस्कोटा - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘अनि कसरी उभो लाग्छ देश ?’ : आयुक्त बाँस्कोटा
Posted by Milap Subedi | ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:५० |
पछिल्लो समय नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनितीक प्रभाव बढ्दै गएको गुनासो छ । जसले गर्दा प्रशासन र सेवाग्राहीे बिचको सम्बन्धपनि अपारदर्शी बन्दै गएको पाईन्छ । जनताले विभिन्न सुचना प्राप्त गर्नुपर्ने सवालमा पनि पत्रकारलाई सुचनाको पहिलो आधिकारिकता मानिन्छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री कार्यलयका पुर्व सचिव तथा राष्ट्रिय सुचना आयोगका आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटा सगँ हेडलाइन नेपालका दिलिप कुवँरले गरेको कुराकानि :
सुचना लेनदेन प्रक्रियामा पत्रकारलाई मुख्य पात्रको रुपमा लिईनुको कारण के हो ?
वास्तबमा, पत्रकारको जिवन भनेको एउटा असजिलो नै छ र सङघर्षमय पनि । पत्रकारहरुले सरकार र जनताको विचमा सेतु को काम गर्छन । त्यसैले यस पेशालाई राष्ट्रको चौथो अङग को रुपमा पनि लिईन्छ । अझै समाजको आखा भनेको नै पत्रकार र पत्रकारीता हो । मुलतः पत्रकारीतालाई झवाट्ट हेर्दा समाज सेवा जस्तो पनि देखिन्छ । पछिल्लो समयमा पत्रकारीता विश्वव्यापि रुपमा व्यवसाय को रुपमा अगाडि वढदै आएको छ । पत्रकारहरुको कर्म र धर्म भनेको पनि सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्नु हो । कहिलेकाहि सञ्चार क्षेत्रमा लागेका साथीहरु माथि पनि टिका टिप्पणि हुन्छ , कुनै समाचारको विषय लाई लिएर । त्यसैले मलाई लाग्छ, यो पत्रकारीता र सञ्चार क्षेत्र एकदमै संवेदनशिल पेशा हो । कुनै समाचारहरु सम्प्रेषण गर्दा निकै होसियारी भएर गर्नुपर्छ । साच्चै एउटा कुशल पत्रकार नै बन्ने हो भने अवस्था अनुसार सत्यको पक्षमा उभीएर जो कोहि सगँ पनि लड्न सक्नुपर्छ । त्यो चाहे एउटा उच्च प्रशासक , एउटा राजनेता , कुनै निकायको प्रमुख नै किन नहोस् । त्यसैले पत्रकारीता भनेको निर्धक्कता का साथ गरीने समाजसेवा भएकाले पत्रकार लाई राष्ट्रको चौथो अङग मानिएको हो ।
पछिल्लो समय सुचना आदान-प्रदानमा केहि दागका छिटाहरु पनि त लागेका छन नि, हैन र ?
खासगरी समाजमा हातका औला बराबर छैनन् । सुचनाको लेनदेन प्रक्रियामा भित्रै केहि उचनिच खाल का व्यक्तिहरु हुन्छन, जसले गर्दा सिङगो क्षेत्रमा नै दाग लागीरहेको छ । मलाई थाहा भए अनुसार देशभरीमा पत्रकार महासघंमा आवद्ध पत्रकारहरुको संख्या नै दश हजार भन्दा बढि छ र अन्य स्वतन्त्र तरीकाले पत्रकारीता गर्दै आउनुभएका साथीहरुको संख्या करिब १५ हजार भन्दा माथि छ । यो संख्यामा पर्ने सबै पत्रकारहरु राम्रा हुनुहुन्छ भनेर म ठोकुवा गर्न सक्दैन । कहि त्यस्ता पत्रकार साथीहरु पनि हुनुहुन्छ जस्ले पत्रकारीताको धर्म र कर्म भन्दा पनि व्यवसाय र आफनो निकटलाई प्रथमिकता दिनुहुन्छ । अझै भन्ने हो भने यस्तो पत्रकारीताको सिङगो क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने तरीकाले पित पत्रकारीता गर्ने साथिहरुले बरु पत्रकारीता गर्न छोडेर गाउँमा कुटो कोदालो गरे हुन्छ । त्यसो भयोभने बरु पत्रकारीता पेशा दाग लाग्न बाट बञ्चित हुन्छ ।र पत्रकारीतामा भएगरेका यस्ता विकृतिलाई एउटा आचारसंहिताको हिसाबले हेर्ने भनेको प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासघं हो ।
अब त प्रदेश सरकार छन्, सुचना कसबाट लिने र सुचना दिने निकायले कस्तो सुचाना सम्म सार्वजनिक गर्न मिल्छ त ?
हाम्रो देश मा विभिन्न कार्यलयहरु बाट सर्वसाधारणहरु मागेको सुचना पाएनन् भन्ने सामाचार सुनिरहन्छ । म एक पुर्व प्रशासक भएको नाता ले भन्दा, कार्यलयहरु ले आफ्नो विभिन्न गतिविधिहरु को जानकारी विस्तृत रुपमा नखुलाउनु भनेको त्यहाँ भ्रष्टाचारको बिज पलाउन थालेको महशुस हुनु हो । २०७२ साल असोज ३ गते बनेको सविंधानको धारा २७ मा सुचनाको हक सम्बन्धि विविध कुराहरु उल्लेख गरीएका छन । जसमा जुनसुकै कार्यलयहरुले पनि आफनो विभिन्न गतिविधहरु लाई समयानुकुल मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । जसको लागी प्रत्येक कार्यलयहरुमा सुचनाको लागी भनेरै एक जना सुचना अधिकारी समेत तोकिने व्यवस्था छ । त्यसैले समग्रमा भन्दा जुनसुकै कार्यलयहरुले पनि आफनो कार्यलयमा हुनेगरेको विभिन्न गतिविधिहरु लाई सर्वसाधारणहरु ले सहजै बुझ्ने तरीकाले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि मागेको सुचना पनि कुनै कार्यलयले नदिएको खण्डमा जो कोहि ले पनि सुचना आयोग मा आएर उजुरी दिन सक्छ । त्यपछि को काम कारवाहि सबै आयोग ले हेर्नेछ ।
समाचार लेखेर पेट भरिन्न भन्नेहरुपनि धेरै छन नी ?
यसो हो, पत्रकार कहिल्यै पनि राष्ट्रको अभिन्न अङग बाट अलग भएन । अहिलेका सविंधान मा पनि पत्रकारलाई समाज को आँखा को रुपमा लिइएको छ । पत्रकार ले पनि आफ्नो व्यवसायलाई भन्दा पनि समाज सेवालाई अलि बढि प्रथमिकता का साथ हेर्नुपर्छ । पत्रकार ले चाहे मा जुनसुकै कार्यलयको वकालत गर्न सक्छ । पहिलो कुरा भनेको स्वतन्त्रता आम नागरीक को अधिकार हो । त्यै स्वतन्त्रताको बल प्रयोग गरेर चाहि पत्रकारले सुचना , समाचार लेख्ने हो । दोश्रो कुरा भनेको सुचना को हक सम्बन्धि ऐन प्रयोग गरेर पत्रकारले सुनसुकै सुचना पनि पाउनुपर्छ । र तेस्रो कुरा भनेको सविंधान ले प्रत्याभुती गरे अनुसार कुनैपनि प्रेस लाई सरकारले नै खारेज वा बन्द गर्न सक्दैन । फेरी पछिल्लो समयमा पत्रकारहरु को न्युनतम पारीश्रमिक को कुरा पनि उठिरहेको छ । पत्रकारहरुको न्युनतम पारीश्रमीक साढे १९ हजार भनेर किटान गरीएको छ । अहिले न्युनतम पारीश्रमीक कतिपय ठाउँहरुमा लागु भईसक्यो, कतिपय ठाउँहरुमा लागु हुदै होलान । मिडिया सस्थांले पत्रकारलाई उसले गरे बापत उचित पारीश्रमिक दिनुपर्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने त नियम भन्दा माथि कोहि छैन , त्यसपछि को हकदार वा सरकार को भागेदार भनेको नै पत्रकार हो । त्यसैले त पत्रकार लाई चौथो अगँको को सज्ञां दिएको छ ।
प्रसङग मोड्न चाहन्छु । कति प्रधानमन्त्रिहरुको कार्यकाल सम्म सचिबको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो ?
मैले प्रधानमन्त्रि कार्यलयमा तिन वटा प्रधानमन्त्रिहरुको कार्यकाल सम्म रहे । डा.बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र सुशिल कोईराला । तिनै जनाको कार्यकालमा नै मलाई काम गनै कुनै त्यस्तो अफ्ट्यारो भएन । मेरो आफ्नै प्रकृतिले पनि हुनु सक्छ, कसै सगँ पनि मनमुटाबमा काम गर्न परेन । डा.बाबुराम भट्टराई सगँ झन म उहाँ प्रधानमन्त्रि हुनु अगाव नै परीचित थीए । मैले राजधानिमा पनि १२९ कि.मि मोटरबाटो कालो पत्रे गरेको हुँ जसमा बाबुराम जि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो । त्यस्तै सुशिल कोईराला को पालामा पनि मलाई उहाले आफै ले उच्च प्रशासक को हिसाब ले प्रशासन सुधार,कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति को संयोजक तोकिदिनु भयो । खिलराज रेग्मी सगँ पनि मैले प्रधानन्त्रि कार्यलय मा कयौ पटक काम कै शिलशिला मा सँगै रात बिताएको छु । यसरी समग्र मा भन्दा तिनै जना प्रधानमन्त्रि सगँ को मेरो सहकार्य एकदमै अबिस्मरणिय रह्यो ।
तपाइलाई लाग्दैन कि, देश बिग्रेको आवश्यक भन्दा बढि सत्ता परीवर्तनले हो ?
एकदमै, यसमा कुनै दुविधा नै छैन । म प्रमुख सुचना आयुक्त ले भन्यो भनेर कुनै दलको मन दुख्ला भन्ने पनि छैन । मुलुकमा आवश्यक भन्दा बढि राजनिति भो । त्यो कुरा राजनिति गर्ने राजनेता, राजनितिज्ञहरु आफैले बुझिरहनु भा को छ । नेपाल को राजनिति मात्र बढ्यो विकासको गति बढेन । राजनिति पनि अनुत्पादनमुलक हुन पुगेको छ । यदि उत्पादनमुलक राजनिति हुदो हो त सायद विकास र समृद्धिको गति अगाडि बढ्थ्यो । साच्चै भन्ने हो भने त अझै, हरेक क्षेत्र मा सर्वसाधारणलाई प्रतिनिधित्व गर्न दिनुपर्छ । तर यहाँ त, जसको शक्ति त्यस्कै भक्ती भने जस्तै भईरहको छ । अनि कसरी उभो लाग्छ देश ? देशमा नामको मात्र लोकतन्त्र भो कामको लोकतन्त्र हुन सकेन । आजको एउटा साधारण जनता भोलि राजनिति गर्न थाल्छ अनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नै अतित लाई बिर्सन्छ । त्यसैले देश बिग्रेको हो आवश्यक भन्दा बढि राजतिनि ले ।
राजनितीक दबाब बढ्यो भने त तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने प्रशासकहरुलाई गाह्रो हुन्न र ?
त्यो त हुन्छ नै । मनको व्यथा अरुलाई के था भन्छन । प्रशासकहरु, कर्मचारीहरु यस्तो क्षेत्रमा काम गर्नु अगाडि नै माथिबाट आएको जस्तो निर्देशन पनि मान्ने भन्ने कबुल गर्छन । कहिलेकाहि त्यै माथिका निर्देशन दिने, निति तथा कार्यक्रम बनाउने ले नै गल्ती गरीदिन्छ र समस्या छ । जागीर गर्दा कबुल गरीन्छ, त्यसपछि जागीर को खातिर भएपनि निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
सेवाग्राहिलाई कसरी उपयुक्त र प्रभावकारी सेवा दिन सक्छ त ?
त्यसको लागी पहिलो कुरा, म आम जनताको सेवक हुँ , जनता सार्वभौमसत्ता का मालिक हुन, सेवक र जनता विचको सम्बन्ध प्रभावकारी सेवा बाट मात्र राम्रो बन्न सक्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । दोश्रो कुरा, म कार्यलयमा जनतालाई सेवा दिन बसिसकेपछि कसैलाई विभेद नगरी सेवा गर्नेछु , मैले टोकन प्रणालि दिन्छु , नागरीक वडापत्रमा उल्लेख गरीएका सबै कुरालाई आत्मसात गर्छु भन्ने कुराको अठोट हुनुप¥यो । र तेस्रो कुरा, म जतिपनि काम गर्छु त्यसको सार्वजनिक गर्छु, निर्माण स्थलहरु मा होडिङ वोर्डहरु टाँस्छु भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुप¥यो । यसरी समग्रमा जनता सगँ नजिक भएर, समन्वय गरेर, जनतालाई कसरी खुशि पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा मा होसीयारी आपनाईयो भने जो कोहि पनि कार्यलय को एउटा कुशल कर्मचारी बन्न सकिन्छ र जनतालाई पनि उपयुक्त, स्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ ।
अन्त्यमा, केही ?
देश हाम्रै हो । देश बनाउने हामि नै हौ । कसैले बाहिर बाट आएर गर्दिला भन्न पनि होईन । सा साना कार्यलयहरु को गल्तीले, बदमाशिले त्यस्को पुरा क्षेत्र मा नै दाग लागिरहेको हुन्छ, त्यो चाहे, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थय, अन्य गैरसरकारी सस्थां नै किन नहोस । त्यसैले देशमा भ्रष्टाचारी नियन्त्रण भनेको पारदर्शिता हो । जुनसकै कार्यलयहरु को गतिविधि थाहा पाउने सर्वसाधारण को हक छ । सुचना लेनदेनमा हिचकिचाउनु हुन्न । अन्त्यमा, तपाईको अनलाईन परीवारलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
Previousविश्वकप जित्ने ब्राजिल र जर्मनीको सम्भावना बढी
Nextभारत सरकारले बिराटनगरस्थित फिल्ड अफिस बन्द गर्ने
सुत्केरी श्रीमतीको कपडा धुने उनी गाउँकै पहिलो व्यक्ति
९ बैशाख २०७४, शनिबार ०८:५१
वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक !
२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०८:०१
दशै मनाउन गएकाहरु धमाधम राजधानी फर्कदै, चोक तथा सडकमा चहलपहल बड्यो
१६ आश्विन २०७४, सोमबार ०९:२५
‘फेट अफ फ्युरियस’ले तोड्यो बक्स अफिसको अन्तराष्ट्रिय रेकर्ड
५ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:०५